Abavelisi beInsulator & nababoneleli |China Insulator Factory
100% yaseTshayina yoqobo HYW-12 ...
DTSD546 iSigaba seSithathu seSine Wi...
I-DIN kaloliwe eSigaba esinye sokwahlulwa...
Umbane weSigaba esinye se-Sm...
Isiseko soMgangatho we-ANSI ...
ISigaba esiThathu saBahlawulwa kwangaphambili abaSmart...
IsiGaba esinye seMisebenzi emininzi...
ISigaba esiThathu esiNxina se-DIN Stan...
IsiGaba esiThathu semisebenzi emininzi...
IYunithi yoNxibelelwano lwabaThengi be...
IsiGaba esiSinye sokuchasa ukonakala M...
I-BS yeSigaba esiSinye seNtlawulo yaPhambili ...
IsiGaba esiSinye se-Smart Prepayme...
RS485 ukuya kuMqokeleli weDatha weGPRS
Iintlobo ezininzi zoNxibelelwano Da...
UKhuseleko oluPhezulu lweDatha...
ISigaba seSithathu soMbane Sma...
Uhlobo lwePin yePorcelain Insulator ANSI 56-3
I-ANSI Class 56-3 I-porcelain insulators isetyenziswe kwimigca yokusabalalisa i-voltage ephakathi kunye neendawo zokusasaza ngaphezulu.Ziyilelwe ukuba zimelane neemeko ezimbi zokusingqongileyo ezifana nempepho yolwandle kunye neekhemikhali ezikhoyo kwiindawo zemizi-mveliso.
Bakwamelana noxinzelelo lwe-thermal, oluguquguqukayo kunye nombane olubangelwa ziisekethe ezimfutshane ezinokwenzeka, amandla ombane aphezulu ombane kunye nombane ongaphezulu.
Uhlobo lwePin yePorcelain Insulator ANSI 56-2
I-ANSI I-Class 56-2 i-porcelain insulators isetyenziswe kwimigca yokusabalalisa i-voltage ephakathi kunye neendawo zokusasaza ngaphezulu.Ziyilelwe ukuba zimelane neemeko ezimbi zokusingqongileyo ezifana nempepho yolwandle kunye neekhemikhali ezikhoyo kwiindawo zemizi-mveliso.
Ukumiswa kohlobo lwePorcelain Insulator
I-ANSI Class 52-3 I-porcelain insulators isetyenziswe kwimigca yokusabalalisa i-voltage ephakathi kunye neendawo zokusasaza ngaphezulu.Ziyilelwe ukuba zimelane neemeko ezimbi zokusingqongileyo ezifana nempepho yolwandle kunye neekhemikhali ezikhoyo kwiindawo zemizi-mveliso.Bakwamelana noxinzelelo lwe-thermal, oluguquguqukayo kunye nombane olubangelwa ziisekethe ezimfutshane ezinokwenzeka, amandla ombane aphezulu ombane kunye nombane ongaphezulu.
Ukumiswa kohlobo lwePolymeric Insulator
Ukumiswa kohlobo lwePolymeric Insulators zenziwe ngezona zinto ziphezulu.Ingundoqo yenziwe nge-fiberglass ene-Fiberglass Round Rod uhlobo lwe-ECR kunye ne-insulating material yezindlu kunye neeshedi zerubha ye-silicone ehambelanayo.
Ziyilwe kwaye zenziwe ukuba zifakwe njengenkxaso yemigca ephezulu, efanelekileyo ukumelana noxinzelelo oluvela kubunzima kunye namandla abaqhubi kunye nezixhobo zetsimbi ezibamba abaqhubi, ukumelana nesenzo somoya kubo nakwizinto abazenzayo. inkxaso.Bamelana noxinzelelo lwe-thermal, oluguquguqukayo kunye nombane oluvela kwiisekethe ezimfutshane ezinokwenzeka, amandla ombane aphezulu ombane kunye nombane ongaphezulu.
Uhlobo lwePIN yePolymeric Insulator
Uhlobo lwePin I-Polymeric Insulators zenziwe ngezona zinto ziphezulu.Ingundoqo yenziwe nge-fiberglass ene-Fiberglass Round Rod uhlobo lwe-ECR kunye ne-insulating material yezindlu kunye neeshedi zerubha ye-silicone ehambelanayo.